cryptocurrencies အကြောင်းအားလုံး- Bitcoin၊ Ether၊ Litecoin၊ .. ICOs၊ ကုန်သွယ်မှု
cryptocurrencies အကြောင်းအားလုံး- Bitcoin, Ether, Litecoin, ...
Bitcoin၊ Ether၊ Litecoin၊ Monero၊ Faircoin... ၎င်းတို့သည် ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးသမိုင်း၏ အခြေခံအစိတ်အပိုင်းများ ဖြစ်နေပါပြီ။ Blockchain၊ ပိုက်ဆံအိတ်၊ အလုပ်သက်သေ၊ လောင်းကြေးအထောက်အထား၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအထောက်အထား၊ စမတ်စာချုပ်များ၊ အနုမြူလဲလှယ်မှုများ၊ လျှပ်စီးကြောင်းကွန်ရက်၊ လဲလှယ်မှုများ၊ ... ၎င်းကို လျစ်လျူရှုပါက ကျွန်ုပ်တို့ကို အမျိုးအစားအသစ်တစ်ခု၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာစေမည့် နည်းပညာအသစ်တစ်ခုအတွက် ဝေါဟာရအသစ်တစ်ခု စာမတတ်ခြင်း 4.0 ။
ဒီနေရာ ကျွန်ုပ်တို့သည် cryptocurrencies ၏အဖြစ်မှန်ကို သေချာစွာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့သည် အထူးခြားဆုံးသတင်းကို မှတ်ချက်ပေးကာ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသော ငွေကြေးလောက၏လျှို့ဝှက်ချက်များအားလုံးကို ပိတ်ပင်တားဆီးမှုနည်းပညာနှင့် ၎င်း၏ အကန့်အသတ်မရှိနီးပါးဖြစ်နိုင်ခြေအားလုံးကို ဖော်ပြပါသည်။
1 Blockchain ဆိုတာဘာလဲ။
2 cryptocurrency ဆိုတာဘာလဲ။
3 အဓိက cryptocurrencies
4 ပိုက်ဆံအိတ် သို့မဟုတ် ပိုက်ဆံအိတ်
6 ICOs၊ ပရောဂျက်များအတွက် ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုနည်းလမ်းအသစ်
Blockchain သို့မဟုတ် လုပ်ကွက်ကွင်းဆက်သည် 21 ရာစု၏ အပျက်အစီးဆုံးနည်းပညာများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။. အိုင်ဒီယာသည် ရိုးရှင်းပုံရသည်- ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသော ကွန်ရက်တွင် ဖြန့်ဝေထားသော ထပ်တူဒေတာဘေ့စ်များ။ သို့သော်လည်း၊ ၎င်းသည် သတင်းအချက်အလက်မပြောင်းလဲနိုင်မှုကို အာမခံရန်၊ အချို့သောအချက်အလက်များကို လုံခြုံသောနည်းလမ်းဖြင့် ရယူသုံးစွဲနိုင်စေရန်၊ ထိုဒေတာကို လုံးဝဖျက်ဆီး၍မရဖြစ်နေစေရန်နှင့် စမတ်ကျသော စာချုပ်များကိုပင် လုပ်ဆောင်နိုင်စေရန်၊ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ပါရာဒိုင်းအသစ်၏ အခြေခံဖြစ်တည်နေပါသည်။ စည်းကမ်းချက်များသည် လူသားအမှားမရှိဘဲ ပြည့်စုံသည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊၊ cryptocurrencies ဖန်တီးမှုကိုခွင့်ပြုခြင်းဖြင့်လည်းငွေကိုဒီမိုကရေစီကိုပေးသည်။
Crypto ဆိုသည်မှာ ထုတ်ပေးခြင်း၊ လည်ပတ်ခြင်း၊ အရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် လုံခြုံရေးတို့ကို လျှို့ဝှက်ကုဒ်အထောက်အထားများဖြင့် ရှင်းလင်းစွာပြသနိုင်သော အီလက်ထရွန်နစ်ငွေကြေးတစ်ခုဖြစ်သည်။ Blockchain နည်းပညာကို အခြေခံ၍ Cryptocurrencies သည် ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသော ငွေကြေးပုံစံအသစ်ကို ကိုယ်စားပြုသည်။ အခွင့်အာဏာကို အဘယ်သူမျှ အသုံးမချဘဲ ယခုအချိန်အထိ ကျွန်ုပ်တို့ သိထားသည့် ငွေများကဲ့သို့ အသုံးချနိုင်သည် ။ Cryptocurrencies သည် သုံးစွဲသူများ၏ ထောက်ပံ့မှုနှင့် ဝယ်လိုအားအပေါ် အခြေခံ၍ ၎င်းတို့ကို ပေးဆောင်သည့် တန်ဖိုး၊ အသုံးပြုမှုနှင့် ၎င်းတို့ကို အသုံးပြုပြီး ၎င်းတို့ဝန်းကျင်ရှိ ဂေဟစနစ်ကို တည်ဆောက်သည့် အသိုင်းအဝိုင်း၏ ထပ်လောင်းတန်ဖိုးများပါ ရရှိနိုင်သည်။ Cryptocurrencies သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်လာရန် ဤနေရာတွင်ရှိနေပါသည်။
Bitcoin သည် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် Blockchain မှဖန်တီးသည့် ပထမဆုံး cryptocurrency ဖြစ်ပြီး ထို့ကြောင့်၊ လူသိများသည်။ အသုံးပြုရ ရိုးရှင်းသော၊ မြန်ဆန်၊ ဘေးကင်းပြီး စျေးသက်သက်သာသာဖြင့် ငွေပေးချေမှုနှင့် တန်ဖိုးလွှဲပြောင်းခြင်းနည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ် စိတ်ကူးထားသည်။ ၎င်း၏ကုဒ်သည် open source ဖြစ်သောကြောင့်၊ ၎င်းကို အခြားသောလက္ခဏာများနှင့်အတူ အခြားသော cryptocurrencies အများအပြားကို ဖန်တီးရန်နှင့် မကြာခဏ၊ အခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ စိတ်ကူးစိတ်သန်းများနှင့် ရည်ရွယ်ချက်များနှင့်အတူ အသုံးပြုပြီး ပြင်ဆင်နိုင်သည်။ Litecoin၊ Monero၊ Peercoin၊ Namecoin၊ Ripple၊ Bitcoin Cash၊ Dash၊ Zcash၊ Digibyte၊ Bytecoin၊ Ethereum... သည် အချို့သော ဖြစ်သော်လည်း ထောင်ပေါင်းများစွာရှိသည်။ သတင်းအချက်အလက်၊ ဒေတာနှင့် လူမှုဆက်ဆံရေးများကိုပင် ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်ပုံပြောင်းလဲနေသော နည်းပညာများနှင့် ဆက်စပ်နေသော ရည်မှန်းချက်ကြီးသော ပရောဂျက်အချို့နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည်။ ဗင်နီဇွဲလားအစိုးရမှ ထုတ်ပေးသော Petro ကဲ့သို့သော ၎င်းတို့၏ စီးပွားရေးပြဿနာများကို ဖြေရှင်းချက်အဖြစ် အစိုးရများက ထုတ်ပေးထားပြီး ရေနံ၊ ရွှေနှင့် စိန်များကို အရန်ငွေဖြင့် ပံ့ပိုးပေးနေသည့်တိုင် ရှိပါသည်။ အခြားငွေကြေးများသည် အရင်းရှင်ဆန့်ကျင်ရေးသဘောသဘာဝ၏ သိသိသာသာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၏ ငွေကြေးဖြစ်ပြီး Faircoin ကဲ့သို့သော အရင်းရှင်လွန်ခေတ်ဟု ၎င်းတို့ခေါ်ဝေါ်သည့် အသွင်ကူးပြောင်းရေးစီးပွားရေးဂေဟစနစ်ကို တည်ဆောက်ကြသည်။ သို့သော် cryptocurrencies နှင့်ပတ်သက်သောစီးပွားရေးစိတ်ကူးများထက် များစွာပိုသည်- ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင် cryptocurrency ဖြင့် အကောင်းဆုံးပံ့ပိုးမှုများကို ဆုချပေးသော လူမှုကွန်ရက်များ၊ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသောဖိုင်လက်ခံခြင်းကွန်ရက်များ၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုစျေးကွက်များ… ဖြစ်နိုင်ချေများမှာ အဆုံးမရှိလုနီးပါးဖြစ်သည်။
ပိုက်ဆံအိတ် သို့မဟုတ် ပိုက်ဆံအိတ်
cryptocurrencies ၏ကမ္ဘာနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်ဆံရန်စတင်ရန်၊ ဤသို့မဟုတ်ထို cryptocurrency ကိုလက်ခံရန်နှင့်ပေးပို့ရန်အသုံးပြုသည့်ဆော့ဖ်ဝဲအသေးစားတစ်ခုသာလိုအပ်သည်။ ပိုက်ဆံအိတ်များ၊ ပိုက်ဆံအိတ်များ သို့မဟုတ် အီလက်ထရွန်နစ်ပိုက်ဆံအိတ်များသည် Blockchain ၏မှတ်တမ်းများကို ဖတ်သည်။ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ ထည့်သွင်းမှုများသည် ၎င်းတို့ကို ခွဲခြားသတ်မှတ်သည့် သီးသန့်သော့များနှင့် ပတ်သက်သည်များကို ဆုံးဖြတ်ပါ။ ဆိုလိုသည်မှာ၊ ဤအက်ပ်လီကေးရှင်းများသည် သင့်အတွက် ဒင်္ဂါးပြားမည်မျှရှိသည်ကို “သိ” သည်။ ၎င်းတို့သည် ယေဘူယျအားဖြင့် အသုံးပြုရ အလွန်လွယ်ကူပြီး ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် လုံခြုံရေး၏ အခြေခံအကျဆုံး ကဏ္ဍများကို နားလည်ပြီးသည်နှင့် ၎င်းတို့ကို အသုံးပြုသူများအတွက် အမှန်တကယ် ဘဏ်ဖြစ်လာပါသည်။ အီလက်ထရွန်းနစ်ပိုက်ဆံအိတ်တစ်လုံး အလုပ်လုပ်ပုံကို သိရှိခြင်းသည် ဤနေရာတွင်ရှိပြီးသား အနာဂတ်ကို ရင်ဆိုင်ရန်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။
သတ္တုတူးဖော်ခြင်းသည် cryptocurrencies ကို mining လုပ်သည့်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။. ၎င်းသည် ဆန်းသစ်သော အယူအဆတစ်ခုဖြစ်သော်လည်း မိရိုးဖလာသတ္တုတူးဖော်ခြင်းနှင့် ဆင်တူသည့်အချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ Bitcoin ၏အခြေအနေတွင်၊ ၎င်းသည်ကုဒ်ဖြင့်ဖန်တီးထားသောသင်္ချာပုစ္ဆာကိုဖြေရှင်းရန်ကွန်ပျူတာများ၏စွမ်းအားကိုအသုံးပြုခြင်းအကြောင်းဖြစ်သည်။ အက္ခရာများနှင့် နံပါတ်များကို ဆက်တိုက်ကြိုးစားခြင်းဖြင့် စကားဝှက်ကိုရှာဖွေရန် ကြိုးစားခြင်းနှင့်တူသည်။ ကြိုးကြိုးစားစားလုပ်ပြီးမှ တွေ့တဲ့အခါ၊ ဘလောက်တစ်ခုကို ဒင်္ဂါးပြားအသစ်များဖြင့် ဖန်တီးထားသည်။. cryptocurrencies ကိုအသုံးပြုရန်အတွက် သတ္တုတူးဖော်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ မည်သည့်အရာကိုမျှ သိရန်မလိုအပ်သော်လည်း၊ ၎င်းသည် စစ်မှန်သော crypto ယဉ်ကျေးမှုရှိရန်အတွက် သင်ကိုယ်တိုင်ရင်းနှီးထားသင့်သည့် အယူအဆတစ်ခုဖြစ်သည်။
ICOs၊ ပရောဂျက်များအတွက် ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုနည်းလမ်းအသစ်
ICO သည်ကန ဦး အကြွေစေ့ရောင်းဝယ်မှုကိုဆိုလိုသည်။ ၎င်းသည် Blockchain လောကရှိ ပရောဂျက်အသစ်များအတွက် ဘဏ္ဍာငွေရှာဖွေနိုင်သည့် နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။. ငွေကြေးရင်းမြစ်များရရှိရန်နှင့် ရှုပ်ထွေးမှုနည်းသော ပရောဂျက်များကို ဖော်ဆောင်ရန်အတွက် တိုကင်များ သို့မဟုတ် ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးများ ဖန်တီးခြင်းသည် လုံးဝအကြောင်းအရာဖြစ်သည်။ Blockchain နည်းပညာ မပေါ်ပေါက်မီ ကုမ္ပဏီများသည် အစုရှယ်ယာများ ထုတ်ပေးခြင်းဖြင့် ၎င်းတို့ကို ငွေကြေးထောက်ပံ့နိုင်ကြသည်။ ယခု လက်တွေ့တွင် မည်သူမဆို ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင် cryptocurrency ထုတ်ပေးနိုင်ပြီး ၎င်းတို့ဖန်တီးလိုသော ပရောဂျက်အတွက် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်နိုင်ခြေများကို မြင်တွေ့ရပြီး အချို့ကိုဝယ်ယူခြင်းဖြင့် ၎င်းတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် ဆုံးဖြတ်နိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။ ၎င်းသည် လူစုလူဝေး ရန်ပုံငွေရှာဖွေခြင်းပုံစံ၊ ငွေကြေးအရင်းအမြစ်များကို ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ယခုအခါတွင် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများမရှိခြင်းကြောင့် ICO များသည် ဆွဲဆောင်မှုရှိသောပရောဂျက်များ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ရန် လူတိုင်းလက်လှမ်းမမီနိုင်သော်လည်း၊ ၎င်း၏ပရောဂျက်များသည် လုံးဝလိမ်လည်မှုဖြစ်ကြောင်း ICO များကို စတင်နိုင်ပြီဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့် သင့်မျက်လုံးတွေကို တစ်ဖက်ကိုလှည့်ဖို့ ဒါက အတားအဆီးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အလွန်သေးငယ်သော ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများမှပင် ကောင်းမွန်သော ပြန်လာရန် အလားအလာ ရှိနေပါသည်။. ဤအယူအဆတစ်ခုစီကို အနည်းငယ်ပိုမိုလေ့လာရန်မှာ ရိုးရှင်းပါသည်။ ဒီနေရာမှာ စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးကို အရင်ပြောပြပါမယ်။